Ilay 15 Taona Niharan’ny Fanolanana No Tradoza Farany Vokatry Ny Ady Amin’ny Zavamahadomelina Ataon’i Duterte · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2018 6:53 GMT
Pikantsary avy amin'ny fantsona mpampita vaovao News5Everywhere/Youtube.
Tamin'ity herinandro ity, nahitàna lesoka vaovao indray ny ady ataon'ny filoham-panjakana Filipiana, Rodrigo Duterte hiadiany amin'ny zavamahadomelina, rehefa voasambotra tao Manille, renivohitra ny manamboninahitra iray avy amin'ny mpitandro filaminana, taorian'ny nahafantarana azy ho nanolana zazavavy kely iray vao 15 taona monja, zanak'ireo noahiahiana tamin'ny zavamahadomelina.
Niely be ireo sarin'ilay manamboninahitra, Eduardo Valencia, avy amin'ny polisim-pirenen”i Filipina (PNP) mitalaho amin'ireo lehibeny noho ny nitondràny ilay zazavavikely tany amin'ny hotely iray mba ho takalon'ny fanafahana an'ireo ray amandreniny. Noporofoin'ireo fitsirihana ara-pahasalamana ny marika fisianà fanolanana.
Ireo mpanakiana ny filoha Duterte dia milaza fa ny fankahalany vehivavy, ireo vazivaziny momba ny fanolanana sy ireo fiarovana miverimberina hiarovana ny mpitandro filaminana sy ny tafika, ao anatin'ireo ady atao amin'ny zavamahadomelina sy ny fanoherana fikomiana entin'ny governemantany, izay nanao ho ara-dalàna ny kolontsaina fanamboniantena ‘macho’ amin'ny fanararaotana ara-nofo.
Nokianin'ny lehiben'ny mpitandro filaminana nandritra ny fandaharana iray nivantana tamin'ny fahitalavitra, nikasa ny hanamarina an'ireo zava-bitany i Valencia tamin'ny alalan'ny fanamafisana fa raha ny tena izy tsy zavatra vaovao akory ny fanolanana ao anivon'ireo mpitandro filaminana:
Andriamatoa, manana fianakaviana aho. Andriamatoa, tsy vaovao io ho an'ny olontsika, isaky ny misambotra mpivarotra zavamahadomelina isika.
Vao haingana tamin'ity volana ity ihany, mpianatra telolahy zandriny indrindra avy amin'ny sekoly ambony ao amin'ny Akademian'ny PNP no nanokafana fanadihadiana noho ny fahafantarana fa nanao ankeriny herisetra ara-nofo taminà mpianatra roa kilasy voalohany tao amin'ny Akademian'ny polisy.
Tatitra iray an'ny Center for Women’s Resources (CWR) navoaka tamin'ny 31 oktobra no nampiseho fa, misy tranga 33 voarakitra mikasika an'ireo herisetra nataon'ny polisy tamin'ireo vehivavy sy ireo ankizy hatramin'ny nandraisan'i Duterte fitondrana tamin'ny 30 jona 2016 ka hatramin'ny oktobra 2018. Eo amin'io tarehimarika io, ny 16 amin'ireo dia fanolanana avokoa ary ny ambiny amin'ny endrika herisetra ara-batana hafa, sotasota ara-nofo, fandrahonana sy fanondranana olona.
TENA IZY NY SASANTSASANY AMIN'IREO BIBY IREO. Mivelona amin'ny hetra izy ireo, mitafy fanamiana ary manafika vehivavy sy ankizy marefo. Ny tena mampihoronkoditra dia ny filoham-pirenena mandefitra amin'ny heloka bevava ataon'izy ireo. #LabananAngAbuso pic.twitter.com/jhEIlYKw00
Ao anatin'ireo tranga hafa marobe, nilaza tamin'ireo andian-tafika i Duterte, tamin'ny taona lasa, fa ho hamaly ireo trangana fanolanana nataon'izy ireo:
Efa miasa amin'io. Ho raisiko an-tanana ny rehetra. Izaho no hanagadra anareo. Raha manao fanolanana in-telo misesy ianareo, ho raisiko ny andraikitra.
Ireto ny fanehoankevitra sasantsasany feno hatezerana teo amin'ny Twitter:
Fanomezan'i Duterte ho an'i Filipina io: manome toky an'ireo polisy mba haka ankeriny, hamono sy hanao herisetra amin'ireo fianakaviana tena faran'izay mahantra indrindra. Akala ko ba adik ang nagnanakaw at nagrerape? Raha misy ny afobe, manantena anareo rehetra ho mendy ao aho. https://t.co/2trSbglkCu
Noheveriko fa ireo mpiankindoha amin'ny zavamahadomelina no nanidina sy nanolana?
Manaja ny Filoham-pirenena Duterte ny Polisim-pirenena ao Filipina. Miainga avy amin'ireo famonoana olona tsy misy antra an'ireo mahantra voaendrikendrika amin'ny rongony ka hatramin'ny fanolanana an'ireo vehivavy sy ireo ankizy, mivandravandra be ny fandrisiahan'ny filoham-pirenena azy ireo, tamin'ny fomba azo tsapain-tanàna. Nitondra fahoriana tamin'ny firenena Filipiàna ny teny sy ny asa nataony.
Ny governemantan'i Duterte no faran'izay ratsy indrindra amin'ny tantara mampihoronkoditra rehetra!
In-telo miantaona, nandritra ireo volana roa farany, ny governemanta #Duterte no nanambara fa apetrak'i #Filipiana ho ambony ny ain'ireo polisy miohatra amin'ny an'ireo “voarohirohy amin'ny resaka rongony”. Io foto-kevitra tao an-dapa io no nitarika an'ity kisoan'olona ity hanolana zazavavikely 15 taona satria ‘voarohirohy’ ireo ray amandreny.https://t.co/EoNL0k3RFf
Tsy fahadisoany irery ihany izany, fa toy izao ijerena azy io: hevero ho toy ny ray i Duterte (isika ihany koa no miantso azy ho “Tatay”‘), dia miteny amin'ireo zanany izy fa azo atao ny manolana ary matetika manao hatsikana momba an'io. Rehefa manolana ireo zanany, tsy hitazona ny rainy ho tomponandraikitra nanome vàhana ve ianareo?
Ny voa no amantarana ny hazo. Tsy midika ho famonoana olona fotsiny ny Tokhang, fa fanolanana ihany koa. Lasa tsy mahalala menatra kokoa ireo mpanao heloka bevava ao amin'ny governemanta eo ambany fiahian'i Duterten ratsy toetra, izay namporisika an'ireo mpanao herisetra ao aminy – ny AFP & PNP mba hamono an'ireo mahantra sy hanolana ireo vehivavy tsy misy tahtra ny hovoasazy, ary miaraka amin'ireo valisoa ihazakazahany.
“SOP” Fanolanana amin'ny maha SOP. Rà mandriaka.
Fa io no firenena iray entin'i Duterte, mpanjaka tokana iray izay mihevitra fa ny olana tokana azo iadiana hevitra momba ny fanolanana dia ny fahafantarana hoe iza no voalohany mametraka fanontaniana. https://t.co/hkVmOHDJWH